🏊‍♀️ Bada | Vakashela i-Hultsfred
Thola elinye lamachibi ethu okubhukuda!
Uhalela ukucwiliswa echibini? Kumasipala wethu, kunezindawo eziningi zokugeza ezinhle ongakhetha kuzo. Isihlabathi phakathi kwezinzwane noma utshani obuthambile - lapha idiphu yokupholisa ayikude neze. Uma wena kanye nezingane nincamela ukubhukuda echibini lasendlini elingama-degree angu-27, indawo yokubhukuda yase-Hagadal ikufanele ukuvakashelwa!
Indlu yokugezela yaseVirserum
Indlu yokugezela yaseVirserum yindawo encane yokugeza enephuli evuthayo elinganisa ngamamitha ayi-12,5 x 6. Ichibi sinokujula okusuka kumamitha ayi-0,9 kuye ku-1,5.
Indawo kaHesjön yokugeza
Uyemukelwa endaweni yokugeza kaHesjön! Kukhona indlu yangasese engaphandle, ithoyilethi elikhubazekile, igumbi lokushintshela. Indawo ye-Barbecue, indawo yokubhukuda enama-jetties kanye ne-jumping tower ne-beach volleyball court. Ukusuka endaweni yokupaka izimoto kunomgwaqo owenziwe ngokwezifiso phansi
I-hulngahultsbadet yindawo yokugeza eSilverdalen Ukufinyeleleka nezindawo ezikhangayo zokushintsha amakamelo Indlu yangasese yasenkantolo yeJetty Volleyball
Indawo yokugeza kaLillesjön
Intandokazi nemindeni enezingane. Indawo okugezwa kuyo inejetty, indawo yokosa inyama, indlu engaphandle, ukufinyeleleka kanye nezindawo ezikhangayo Swings Volleyball court Jetty WC Barbecue area
Ukubhukuda kukaHagadal nehholo lezemidlalo
Ukubhukuda kweHagadal nehholo lezemidlalo kunikela ngokubhukuda, ukuzivocavoca, ukubhucunga umzimba noma ukuzihlalela nabangani nokuba nekhofi. Lesi sakhiwo siseduze nemvelo enemizila emihle yokuzivocavoca umzimba.
Ichibi lokubhukuda liyindawo encane yokugeza maphakathi neJärnforsen, cishe amamitha ayi-150 ukusuka egalaji likaphethiloli. Indawo okugezwa kuyo inejetty. Lendawo kamasipala okugezwa kuyo futhi
IKaffeberget itholakala endaweni emaphakathi eningizimu yeVirserum. Indawo okugezwa kuyo inamagquma nesihlabathi notshani. Kukhona ama-jetties amabili, amakamelo okushintsha, ama-swings kanye
Cishe amakhilomitha ayisithupha eningizimu-mpumalanga yeVena yile ndawo enhle yokugeza enezindawo ezinhle eziluhlaza ezenzelwa imisebenzi. Kukhona namakamelo okushintsha, indawo yokosa inyama, indlu yangasese eyomile, amajingi kanye
Uyemukelwa kuKristinebergsbadet, lapha izingane zingazungeza kuthoyizi "Kalle kula". Indawo yokugezela edumile nevakashelwa kahle phakathi kwemindeni enezingane ezincane njengoba ingajulile. Lapha
Indawo yokugeza kaStora Hammarsjön
Indawo yokugezela edumile efakwe endaweni engaphandle. Uya lapha nezingane ezindala ezikwazi ukubhukuda. Ichibi liyashesha ukujula futhi kuthatha isikhashana
Indawo yokugeza iLinden
Ukubhukuda okudumile, echibini lokudoba kanye nesikebhe. Indlela eya ebhavini iyajika. ILinden ichibi elibanda kancane kwezinye izindawo kakhulu
Indawo yokugeza kaHulingen
Indawo yokugeza kaHulingen itholakala eHultsfred, engxenyeni esenyakatho yeHulingen. Eduze kwendawo yokugeza kuneCamp Hultfred. Lapha ungathenga ukungenisa okulula. Endaweni etholakalayo